Rugby vehivavy - Fanomanana :: Nitondra vokatra nahafa-po ny Makis avy any Tonizia • AoRaha
Rugby vehivavy – Fanomanana Nitondra vokatra nahafa-po ny Makis avy any Tonizia
Fandresena dimy tamin’ ireo lalao roa ambin’ny folo vitany no azon’ny ekipampirenena malagasy taranja rugby lalaovin’olona fito sokajy vehivavy, nandritra ny fanomanan-tena natrehin’izy ireo tany Tonizia, tamin’ilay hetsika “Sevens Solidarity Camp”. Ankoatra an’i Madagasikara dia isan’ireo nifanandrina tamintsika nahazoana traikefa tsara ny Toniziana sy ny Keniana, izay samy kalaza amin’ny taranja baolina lavalava lalaovin’olona fito aty Afrika.
Fifaninanana hoentina manomana ny Malagasy amin’ny lalao sakana hatao ny Monaco, Frantsa, (19-21 jona) hikatsahana tapakila handraisana anjara amin’ny Lalao olimpika 2021 any Tokyo, Japana (26 -31 jolay) no tanjontsika tamin’ity fivoahana tany ivelany ity. Nifarana ny sabotsy lasa teo izany ka noheverina ho nahafa-po ihany ny vokatra mba hahafahana manatsara sy manamafy ny fanomanantena indray mialoha an’ireo hetsika goavana.
Niavaka ny zava-bitan’ny Makis, nandritra ny lalao roa nanamarika ny andro faran’ny fifaninanana, ny sabotsy lasa teo. Lavon-dry Rasoanekena Véronique (Vero) tamin’ny isa, 12 noho 5, ry zareo Tonizianina, tamin’ny fihaonana voalohany. Nivadika ny rasa teo amin’ny fifandonana faharoa satria nomontsanin’i Tonizia mpampiantrano, 29 noho 0, indray ny Makis.
« Fihaonana tokana ihany no voalahatra hotanterahana ho an’ny andro faran’ny fifaninanana. Nangataka ny hisian’ny fihaonana fanindroany ry zareo Tonizianina rehefa norombahan’ny Malagasy ny fandresena. Tsy afaka nampijoro ireo mpilalao sangany intsony isika mba hisorohana ny ratra mety ho azon’izy ireo », hoy Randrianarison Eric na Eric Sefo, mpanazatra ny Makis.
Fifamoivoizana :: Misokatra tanteraka ny lalana eny Ambodivona
Fahatrarana volamena tatsy Afrika Atsimo :: Misy ny herijika hitsarana an’ireo telo lahy eto Madagasikara